Mpampianatra Maoritaniana Manao Amboletra Ny Biraon’ny Minisitry Ny Fanabezana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Novambra 2012 13:32 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Deutsch, Português, Italiano, Swahili, عربي
[Fanamarihana: Ny rohy rehetra ato dia mankany amin'ny teny Arabo ]
Andianà mpampianatra avy amin'ny ambaratonga faharoa no nanao amboletra niditra tao amin'ny biraon'ny Minisitry ny Fampianarana ho fanoherany ny famindràna tsy amin'antony mpampianatra 120 ho any aminà sekoly hafa. Ireny famindràn-toerana ireny dia natao hamaizana ireo mpampianatra izay nandray anjara tamin'ny fitokonana tamin'ny taona lasa nitakiana ny hanatsaràna ny fepetra iainan'ny mpiasa eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Noraisin'ireo mpampianatra ho famaizana azy noho ny fitokonana nataon'izy ireo hitakiana ny zony ity fihetsika ity sady koa fanitsakitsahana ny lalàna sivily ao Maoritania.
Ho an'i Mohamed Ould Rabani, Sekretera Jeneralin'ny sendika mahaleotenan'ireo mpampianatry ny ambaratonga faharoa, dia nanakiana mafy ilay famindràn-toerana ho toy ny fiandohan-javatra mahatsiravina eo amin'ny tantaran'i Maoritania ary nangataka ireo namany tsy hanaraka ilay baikon'ny ministera. Tanaty raharaha mitovy amin'izany ihany, andiany hafa misy ireo mpampianatra nafindra tsy amin'antony, no nanao fihetsiketsehana teo anoloan'ny biraon'i Ahmed Ould Bahn, Ministry ny Fampianarana, niampanga ihany koa ilay fanapahan-kevitra sy nitaky ny fisintonana azy io tsy misy hatak'andro. Ny sasany tamin'izy ireo koa dia nanao hetsi-panoherana teo anoloan'ny lapan'ny filoham-pirenena tao Nouakchott ary nandrahona hametra-pialàna amin'ny toerany raha tsy sintonina ilay fanapahan-kevitra. Ilaina ny anamarihana fa nahanton'ny minisitera ny karaman'ny mpampianatra anjatony taorian'ny nandraisan'izy ireo anjara tamin'ireo fitokonana nokarakarain'ny sendika.
Sarin'ny hetsi-panoheran'ireo mpampianatra nakarin'i @mejdmr tao amin'ny Twitter
Ny Sendika Nasionalin'ireo mpampianatry ny Ambaratonga Faharoa dia namoaka fanambaràna iray manameloka ilay famindran-toerana tsy amin'antony:
Ny Ministeran'ny Fanabeazana Maoritaniana dia namindra tsy amin'antony mpampianatra am-polony avy amin'ny ambaratonga faharoa noho ny fandraisan'izy ireo anjara taminà fitokonana ara-drariny izay raisina ho toy ny fanisakitsahana ny zon'ireo mpikambana sendikaly, indrindra fa ny zo hanao fihetsiketsehana, izay iantohan'ny artikla faha-14 ao anaty lalam-panorenana ary ny fifanekena iraisam-pirenena nosoniavin'ny firenentsika, tahaka ny Fifanarahana Iraisam-pirenena momba ny Asa laharana faha-87, izay mifandray amin'ny fahalalahana sendikaly.
Ny bilaogy Tiguend dia mamoaka fijoroana vavolombelona iray avy amin'ny iray tamin'ireo mpampianatra niharan'ilay famindràn-toerana, mitondra ny lohateny hoe “Noho io no antony dia mendrika ahy ny sazy” ka ao anatin'izay no itenenany ny tsy rariny momba izay fanapahan-kevitra izay:
Nampianatra efa ho 10 taona tany amin'ny faritr'i Trarza aho ary nandritra ireo taona ireo dia tsy mbola nahazo velively isa latsaky ny 17 [amin'ny 20 ] aho mandritra ny fanombanana ahy. Niara-niasa taminà tale maro isan-karazany aho ary tsy mbola nisy velively fanapahana ny karamako raha tsy tamin'ity indray mitoraka ity noho ny nandraisako anjara tamin'ilay fitokonana. Tsy mbola nisy mihitsy fotoana tsy namonjeko ny asa na nanaovako antsirambina ny adidiko ary dia nandeha tsara ny zavatra rehetra, isaorana Andriamanitra, mandra-pahatongan'ny tale Mohamed Ould el Talib sy nandefasany tatitra iray ho an'ny talen'ny Rousou School nilazàny tamin'ity farany, nangatahany azy io hanome ahy 6/20 sy hiampanga ahy ho manao sotrobe lava tango sy mpifosa, izay nizahozahoany hatramin'ny nanendrena azy tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ho lehiben'ny fitantanana. Izany rehetra izany no anton'ny famindràn-toerana ahy tsy amin'antony miaraka amin'ireo 16 hafa mpampianatra ao Trarza, izay ny hany hadisoany dia ny nandraisany anjara taminà fitokonana izay fantany tsara fa io dia zony iantohan'ny lalàna ary arovan'ny lalampanorenana ny hisian'ny fiainana mirindra sy fanabeazana mendrika kokoa.
Miteny ny Mauritan.net fa ilay famindràntoerana dia vokatry ny fitarainana iray, niampanga ireo mpampianatra ho “miantso fitokonana sy manao raharaha politika”:
Niainga avy amin'ny tatitra'ireo tale ny famindràn-toerana ireo mpampianatra, tatitra nandalo tamin'ireo governora ary ny taratasin'ireo governora dia nilaza fa mitarika hanao fitokonana sy resa-politika ry zareo.
Dedda Cheikh Brahim dia manakiana ny fomba niatrehan'ny fitondrana Maoritaniana ny hetsi-panoheran'ireo mpampianatra:
Ao anatin'ny demaokrasian'ny miaramila dia voasazy ny hetsi-panoherana ary dia mandoa ny sandan'izany araka ny lalàna ireo mpampianatra amin'izao fotoana.
Nafindra toerana ireo mpampianatra taorian'ny nanapahan'izy ireo hevitra hitaky ny zony. Misy anie Andriamanitra ry Maoritaniana e.
Ilay Maoritaniana mpanao gazety, Mohamed Ould Salem, ihany koa dia nanakiana mafy ny Ministeran'ny Fampianarana amin'ny fananganany krizy ao anatin'ny sehatry ny fanabeazana :
Tsy mifoka ny oksizena tsotra i Ould Bah fa miaina avy amin'ny famoronana krizy sy tsy rariny. Io no antony nanapahany hevitra hanasazy ny 108 amin'ireo mpampianatramendrika indrindra satria ry zareo ireo nandray anjara taminà fitokonana ara-dalàna.
Daty iray vaovao miaraka aminà taona iray voamariky ny krizy ao anatin'ny sehatry ny fanabeazana ahitàna mpampianatra 108 mandà ny fanindràm-toerana fanasaziana ary ny fanomezan-tokin'ireo sendikan'ny fanabeazana hanaovany izay handrodanana ilay fanapahan-kevitra sy minisitra iray tena mahay mamboly krizy sy manangona tsy fahombiazana.
Nasser Al Hachemi mibitsika hoe:
Henatra sy jadona izao. Miombom-po aminao aho oh ianao ilay mitàna ny fanilo.
Mejdi Ahmed, mpikatroka mafàna fo, dia nanana koa izay azony nambara momba ilay raharaha :
Nanao hetsi-panoherana omaly tao anatin'ny faritry ny Ministeran'ny Fampianarana ireo mpampianatra nitaky ny hanafoanana ilay fanapahan-kevitra famindràn-toerana azy ireo – fanapahan-kevitra iray heverin-dry zareo ho tsy rariny.
Al Cheikh Ould Horma koa nibitsika hoe :
Ao Maoritania ny mpampianatra dia misisika ny hamadika ilay fifandirana miaraka amin'ny ministera ho lasa miloko ideolojia mety aminy, ny ministera koa etsy ankilany misisika hanao toy izany amin'ny fangatahan'ireo mpampianatra
Nofintininy hoe :
Efa hanomboka ny taona akademika ao Maoritania ary manomboka indray ny ady eo amin'ny Ministera sy ireo sendika. Ady iray manimba zavatra.